Nguva yekuverenga: 6 maminitsi Kugara muchimiro wakati uchifamba pasina mubvunzo kukahadzika. Kudya zvekuyedza zvinogara zviripo. Izvi zvakasanganiswa nekuzorora mune yako yenguva dzose yekurovedza muviri tsika iyo inowanzo kukonzera kuwa kubva mungoro yekusimbisa. Saka munhu anogara sei akakodzera achifamba? Hazvina…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Munyika yose, kupinza kune zvakasiyana zvakasiyana nemaitiro, semuyenzaniso: Kupa mazano muSouth Africa kunodiwa, sezvazviri muUSA. Unotarisirwa kusiya zano repakati 15 uye 25% muAmerica, uye kana usingaite unokwanisa chaizvo…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Zvinotendwa chaizvo kuti kufamba ndechimwe chinhu chaunotenga kuti uve kana kupfuma! Uye hazvisi izvo zvinodikanwa nguva dzose kuti iwe unofanira kuparadzaniswa nemari yako yawakawana zvakaoma kuti unakirwe neupfumi. Paunenge uchironga kubuda kunze kwezuva-kwakatsvopisa tropical…